Guulaali - Naanna'aa fili
Naanna'aa banuuf, Mul'isi - Naanna'aa filadhu. Naanna'aa siqsuuf, kabala mataduree harkisii. Naanna'a hiidhuuf, qarree kan iddoo hojii gara bitaatti yk gara mirgaatti kabala mataduree harkisii. Naanna'a dhokataa mulisuuf, iddoo duwwaa naanna'a keessatti lama cuqaasi.
Mul'anno wantoota Akaakuu keessaaf Akaakuu naanna'a itti aanee jiru Mallattoo idaatii (+) cuqaasi. Lakkoofsaa wantoota Akaakuu keessaa mul'isuuf, qixa hantuutee keetii Akaakuu naanna'a keessaa irra ka'e. Gara wantaa galmee keessaatti utaaluuf, wantaa naanna'a keessaa irra lama cuqaasi.
Gara wantaa galmee itti aanuu yk duranii keessatti utaaluuf, kamshaa naanna'insa banuuf, sajoo kana Naanna'a cuqaasi kana booda Akaakuu wantaa cuqaasitii, xiyyoota oliif gadii irra cuqaasi.
Kutaa dhokataan galmee keessa Naanna'insa keessaatti halluu fajajaa tahee mul'ata, yammuu qixa hantuutee keetii barruu "dhokataa" irra keessu mul'isa. Wantii kun qabeentoota irraantoof jalaantoo Akkaataa Fuulaa galmee keessattti ; gabatee, barruu, goodayyaalee, saxaatoo, wantoota OLE fi Kasoota itti hinfayyadamnee irrattis nifayyada.
Kamshaa iddoo Akaakuu maalimaa keessaa filattee itti aanuu yk kanan duraa atattamaan utaaluu dandeesu Naanna'insabana. Akaakuu filadhuutii, xiyyoota "Kanan Duraa" fi "Itti Aanee" cuqaasi.
Barbaacha itti fufuuf, sajoo Barbaacha Irra Deebi'i kamshaa Naanna'insa irraa cuqaasis.
Wantoota Itti aanuu